Global Voices teny Malagasy » Singapaoro, Malezia: Mahathir Mohamad sa i Lee Kuan Yew · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Novambra 2018 6:56 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Malezia, Singapaoro, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Tamin'ny alàlan'ny bilaoginy, dia namaly ny fanehoan-kevitry ny Praiminisitra Singapaoreana teo aloha Lee Kuan Yew ny Praiminisitra Maleziana teo aloha Dr. Mahathir Mohamad mikasika ny fifandraisana ara-poko sy ny ‘fanavakavahana ara-politika’ any Malezia.
Ity manaraka ity ny ampahany amin'ny antsafa  niarahan'ny New York Times tamin'i Lee Kuan Yew
Manenina voaroaka tao Malezia. Mieritreritra aho raha nitazona antsika hiaraka ny Tunku, izay nataonay tao Singapaoro, dia neken'i Malezia ho fototra maro ara-poko ho an'ny fiarahamoniny, ny ankamaroan'ny zavatra vitanay tany Singapaoro dia ho vita eto Malezia. Saingy tsy dia betsaka kokoa satria midadasika kokoa ny fototra. Mety hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny ara-poko sy hanatsara ny toe-javatra amin'ny ankapobeny isika. Ankehitriny isika mahita Malezia misara-tendro tanteraka, samy manana ny sekoliny ny Malay, ny Shinoa ary ny Indiana, samy manana ny fiainany ary tsy dia mifandray loatra. Mamaky azy ireo ianao. Ratsy ho antsika izany amin'ny maha mpifanolo-bodirindrina akaiky.
Anisan'ny Federasiona Maleziana tamin'ny taona 1963 i Singapaoro saingy nisaraka taminy roa taona taty aoriana.
Ity ambany ity ny valintenin'ny bilaogin'i  Mahathir:
Ny fanavakavaham-bolon-koditra any Malezia dia mazava tsara fa vokatry ny maha-mpikambana an'i Singapaoro ao amin'ny firenena nandritra ny telo taona monja.
Ny mponina Singapaoreana dia rafetin'ny Shinoa any amin'ny 75 isanjato ary mihazona ny 95 isanjaton'ny toekarena izy ireo. Noho izany izy dia tsy firenena maro ara-poko, fa firenena Shinoa misy vondrona ara-poko vitsy an'isa izay mahantra kokoa ny ankamaroany.
Ao Singapaoro, tsy mahazo alalana ny mpanohitra, henjehina eny amin'ny fitsarana noho ny fanalam-baraka ​​izay olona manohitra ny PAP (fanamarihan'ny mpanoratra: antoko ara-politikan'ny fitondrana) ary raha mandresy amin'ny fifidianana izy ireo, dia tsy avela haka toerana ao amin'ny Parlemanta.
… tarihina sy anjakan'ny Shinoa ara-poko foana ny antoko ary nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny ankapobeny tamin'ny alalan'ny latsa-baton'ny Shinoa. Ny hafa kosa tsy mba miditra mihitsy..
Konpunboyong  namela ity tsikera ity tao amin'ny bilaogin'i Mahathir
Ianao sy Atoa. Lee Kuan Yew dia efa ho 70 taona zokiko. Tsy fantatro na tsy miraharaha izay zava-nitranga tamin'ny lasa teo amin'ny Malezia sy Singapaoro aho. Ny zavatra fantatro sy raharahiako dia any Malezia amin'izao fotoana izao, manana sarangan'olom-pirenena manan-karena izahay ary sarangan'olom-pirenena mahantra raha mitovy saranga avokoa ny olom-pirenena rehetra any Singapaoro.
Dr. Boo Cheng Hau avy any Malezia manazava ny tena antony mahatonga ny fisaratsarahana eo amin'ireo Maleziana.
Raha ny tena izy dia ny politikan'ny fampianarana manavakavaka amin'ireo sekoly isan-karazany sy ny fananganana sekoly ho an'ny Malay irery ihany ary ny foibe fianarana ambony no mahatonga ny fisaratsarahana.
Afaka manapaka ny fanjakana nosy ao Singapaoro miaraka amin'ny fanavakavahany manokana i Lee fa tsy ny firenena isan-karazany sy lehibe kokoa tahaka an'i Malezia. Nahatonga an'i Singapaoro ho firenena mandroso ny vinavinany saingy tsy mety any amin'ny firenena hafa
Where Bears Roam Free avy any Singapaoro nitsikera  an'i Lee.
Isaky ny miteny ny Lahy Antitra, dia momba ny Vanim-potoana Fahiny. Eny, mikasika ny taona enim-polo sy fito-polo, na dia efa taonjato faha-21 aza isika izao.
Miresaka momba ny olana ara-poko nananantsika tany Malezia izy. Miresaka momba ny olana ara-poko mety nananantsika izy raha tsy nanao izao na ity isika. Raha ny marina dia miresaka momba ….. ny tsinontsinona! Hatramin'ny nidirany tamin'ny politika tamin'ny taona 1950, ny lohahevitra ankafizin'ny Lahy Antitra, dia mamela ahy hamerina izany, ny HANY lohahevitry ny Lahy Antitra dia momba ny foko, foko, foko.
Tsy ho takatro mihitsy hoe maninona i Lahy Antitra no mijanona amin'ny lasa. Tsy efa nandao an'i Malezia 40 taona lasa mahery ve isika? Nahoana ny Lahy Antitra no mitondra ny entana efa tamin'ny lasa? Tsy manamaivana an'i Singapaoro ve izy?
Sayang Bangsa  manolotra fenitra iray hitsarana izay mety ho mpitarika marina
Koa ahoana no hanombanantsika izay marina? Mijery izay mahavita mitantana tsara kokoa aho, izay manana toetra tsara kokoa hiantoka ny tsy fisian'ny kolikoly sy fanararaotam-pahefana ary iza no afaka mandray fepetra fisorohana ho famahana ny olana. Noho ireo antony ireo, mihevitra an'i Lee sy Singapaoro ho mahavita sy manao zavatra tsara bebe kokoa aho.
Mety ho kely kokoa i Singapaoro, saingy ny olana atrehiny dia tena sarotra be, maika ary mitarazoka. Raha nitantana an'i Singapaoro hatramin'ny andro voalohany ireo mpanao politika Maleziana, dia heveriko fa ho lasa ambany tanàna i Singapaoro ankehitriny.
Mahathir sy Lee dia samy fantatra fa samy mpanao didy jadona raha mbola teo amin'ny fahefana. Mpifanandrina taloha ireo mpitarika roa ireo izay nifampitsikera ny fitondran'ny ankilany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/24/130807/
 fanehoan-kevitry : http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/race-relations-better-if-singapore-not-turfed-out-says-lky/
 valintenin'ny bilaogin'i: http://chedet.co.cc/chedetblog/2010/09/malaysia-according-to-lky.html
 fisaratsarahana : http://potpouricauseway.blogspot.com/2010/09/mahatir-versus-lee-kuan-yew.html
 Sayang Bangsa: http://dinmerican.wordpress.com/2010/09/14/mahathir-reacts-to-lkys-interview/#comment-63670